Misaona ny fahafatesan’ny mpanoratra an-gazety iray i Georgia · Global Voices teny Malagasy
Anisan'ireo mpanangom-baovao 50 naratra i Lashkarava raha nanangom-baovao ny Diabem-pireharehanaTbilisi
Voadika ny 24 Jolay 2021 4:23 GMT
Pikantsary avy amin'ny fantsona fahitalavitra Zeorziana Formula News avy amin'ny hetsi-panoherana ireo eo ivelan'ny lapan'ny parlemanta ao Tbilisi tamin'ny 11 jolay https://www.youtube.com/watch?v=SAWtpRued1w
Lesko no amantaran'ny mpiara-miasa aminy azy ao amin'ny TV Pirveli, hita faty tao an-tranony tamin'ny 11 jolay tao Tbilisi ny mpanoratra an-gazety sady cameraman Aleksandre Lashkarava, 37 taona. Anisan'ireo mpiasan'ny gazety 50 nizaka faharatrana i Lashkarava raha nanangom-baovao [mg] tamin'ny Dian'ny Fireharehana Tbilisi tamin'ny 5 jolay lasa teo. Nokianin'i Vato Tsereteli, tompon'ny TV Pirveli, ny governemanta tamin'ny fahafatesan'i Laskharava.
Araka ny tatitra nataon'ny fampitam-baovao ao an-toerana, niaritra fahavakisan-taolana amin'ny tava izy ary badenina nandritra ny fanafihana. Mila nanaovana fandidiana izy saingy navoaka hopitaly tamin'ny alakamisy 8 jolay. Rehefa nilaza ny polisy tao an-toerana fa hanao famotorana, mailaka ny minisiteran'ny atitany nanaisotra izay mety ho ahiahy niteraka ny fahafatesana, nanolo-kevitra tamin'ny valandresaka ho an'ireo mpiasan'ny gazety fa mety ho matin'ny rongony tafahoatra ilay mpiasan'ny gazety. Araka ny Radio Tavisupleba, izay servisy zeorziana ao amin'ny Radio Free Europe, nihazakazaka ny polisy haka ny vatana mangatsiaka an'ny mpiasan'ny gazety hanaovana fandidiam-paty na dia eo aza ny fangatahan'ny fianakaviana hampidirana manampahaizana manokana mahaleo tena.
Nipoitra ny Mnisiteran'ny Atitany ao Georgia hilaza fa mety hisy ifandraisany amin'ny rongony ny fahafatesan'ilay mpiasan'ny gazety Aleksandre Lashkarava. Tao amin'ny valandresaka ho an'ny gazety no nilazan'ny minisitera fa nandeha tany Ponichala, faritra malaza amin'ny rongony [fanafody] tsy ara-dalàna [ilay mpanoratra an-gazety], ary nolazainy fa voapoizin'izany izy.
Niteny tao amin'ny sioka iray ny mpanorina ny hetsika politika Droa, Helen Khoshtaria, fa mihoatra ny “mahamenatra” ny fanambaràna savaranonandro navoakan'ny Minisitry ny Atitany:
Nalaina an-keriny tamin'ny fianakaviany ny vatan'i Lashkarava hodinihina ary roa ora taty aoriana dia natao ny fanambarana manondro ny fahabetsahan'ny rongony be loatra ho an'ny fahafatesany. Tsy misy zavatra hafa azo antenaina mihoatra ny mahamenatra, mihoatra ny maharikoriko. Hohazonina ho tompon'andraikitra amin'ity zava-mamparikoditra ity ny rehetra.
Tamin'ny alahady 11 jolay, mponin'i Tbilisi an'arivony no nivory teo ivelan'ny lapan'ny parlemanta nanatontosa hetsika mangina. Farafahakeliny fikambanam-piarahamonina sivily 19 tao an-toerana no nanasonia taratasy iray mitaky ny fialan'ny Praiminisitra Irakli Gharibashvili sy ny Minisitry ny Atitany Vakhtang Gomelauri.
An'arivony ireo nivory teo an-tokotanin'ny Parlemantan'i Georgie manao ny hetsika “tsy maintsy miala ny governemanta mpamono olona”, taorian'ny fahafatesan'ny mpiasan'ny gazety Aleksandre Lashkarava.
#Georgia ??: Fikambanam-piarahamonim-pirenena miisa 19 no nanoratra fanambarana iraisana ho setrin'ny fahafatesan'i Aleksandre Lashkarava. Antsoin-dry zareo ny PM Irakli Garibashvili hiala avy hatrany
Taorian'ny herisetra tamin'ny 5 jolay dia nobedesin'ny Praiminisitra ny mpikarakara ny Diam-Pireharehana Tbilisi ho anton'ny herisetra mandeha amin'izao fotoana. Raha niteny tamin'ny fihaonana nataon'ny governemanta ny Praiminisitra Irakli Garibashvili dia niteny fa “tsy am-pisainana” ny nataon'ny mpikarakara hanao dia eny amin'ny tahala ho an'ny daholobe izay mety hiteraka “fifanandrinan'ny sivily” ao anatin'ny fotoana iheveran'ny mponina ny mari-panondroana LGBTQ ho “tsy azo ekena.”
Tao Batumi, tanàna iray hafa ao Georgia, nifanandrina tamin'ny polisy ny mpanao fihetsiketsehana araka ny tatitra nataon'ny OC Media.
Haingana ny valiny sy ny setriny avy amin'ny fikambanana iraisampirenena.
Mihovitrovitra izahay amin'ny fahafatesana mampalahelo ny mpiasa an-gazetin'ny TV Pirveli taorian'ny herisetra tao Tbilisi tamin'ny 5 jolay. Soatoavina demaokratika tsy maintsy arovana ny fahalalahan'ny Media sy ny fiarovana ny mpiasan'ny gazety. Manonona ny fiaraha-miory lalina amin'ny fianakaviana, namana sy mpiara-miasa amin'i Aleksandre Lashkarava izahay.
Manohana feno ny fanambaràn'i @CarlHartzellEU i ??. Maneho ny fiaraha-miory lalina amin'ny fianakaviana, namana ary mpiara-miasa amin'i Aleksandre Lashkarava mpiasan'ny gazety @TvPirveli izahay. Melohin'i ?? izay rehetra mety ho herisetra. Soatoavina demaokratika tsy maintsy arovana ny fahalalahan'ny Media sy ny fiarovana ny mpiasan'ny gazety.
Ny Orina Mpanasoa Fampivelarana ny Media dia maneho ny alahelony lalina tamin'ny fahafatesan'i Aleksandre Lashkarava, mpakasarin'ny TV Pirveli, izay notafihan'ny vondron'olona elatra farany havanana ara-batana tao Tbilisi tamin'ny 5 jolay
Fikambanam-pampitambaovao Zeorziana 70 eo ho eo, ao anatin'izany ny Georgian Public Broadcaster (GPB na Fampielezam-baovaom-panjakana Zeorziana), no niantso ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena niteny, “na teo aza ireo antso savaranonando avy amin'ny lafim-pihariana sivily (tsy miankina), tsy nandray ny fepetra mifanaraka amin'ny fiarovana ireo solontenam-pampitam-baovao ny fanjakana. tsy nandray fepetra hiaro ireo mpiasan'ny gazety ireo polisy tsy ampy isa.”
Araka ny OC Media, fikambanam-pampitam-baovao maro, tafiditra amin'izany ny Hetsika Henatra (Shame Movement), izay voaroba tamin'ny 5 jolay ihany koa ny biraony, nampanantena ny hetsika Rehareha fa hanavao ny hetsika ataon-dry zareo amin'ny alatsinainy 12 jolay raha tsy hoe angaha tontosa ny fitakiana fialana.
Zeorzia 10 ora izay